Muuri News Network » DEG DEG: Weerar caawa lagu qaaday deeganka Buushka ee duleedka Degmada Lambar konton.
DEG DEG: Weerar caawa lagu qaaday deeganka Buushka ee duleedka Degmada Lambar konton.
Kooxda argagixisada AL-SHABAAB ayaa caawa weerar ku soo qaaday Deegaanka Buushka ee gobolka shabeelaha hoose oo duleedka ka xiga degmada Lambar Konton. Deeganka Buushka ayaa waxa ay fariisin u tahay ciidamada daraawiishta Koonfurgalbeed Soomaalia.
Wararka aan ka heleyno Weerarkaas Caawa lagu qaaday deegaanka Buushka ee Gobolka Shabeelada hoose ayaa sheegaya in uu kadhashay Khasaare nafeed. Warar hordhac ah oo aan ka helnay Buushka ayaa kusoo waramaya in uu Geeriyooday Allah u Naxriistee Gaashaanle CARUUNI oo ka mid ahaa saraakiisha Ciidamada daraawiishta koonfurgalbeed deegaankana ka soo jeeda.
Waxa kaloo jira khasaare aan helin oo Ciidamada deegaanka caawa kasoo gaaray Weerarka lagu soo qaaday, walow aan si dhab ah loo heli karin waxa meesha ka jira.
Ilaa hada lama xaqiijin karo cida gacanta ku haaysa deegaanka, waxaana aad u yar in warbixin laga helo dadka halkaasi ku dhaqan cabsi jirta darteed, inta badan Mobelada ayaa densan halka kuwa qaar ee dhacaya ay yihiin kuwo aan laga jawaabeynin wicitaankooda.
Kooxaha dableyda ee weerarka qaaday ayaa warar hor dhac ay sheegayaan in ay kasoo baxeen deegaanka Saliini oo dhanka Bari kaga Beegan Buushka (Deexda), waxaana la tuhunsanyahay in ay ka tirsanyihiin Maleeshiyada Shabaab.
Waxaan idiin soo gudbin doonaa wixii war ah eek u soo kordha weerarka caawa lagu soo qaaday deegaanka Buushka ee gobolka shabeelada hoose.
Isha waraka oo dhan .. muurinews.com